Gossip – Page2– An Online Entertainment News Portal
February 24, 2019 Tulasa Karki 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- केही दिन अगाडि काठमाण्डौको विग मुभिजमा केही चिनिएका कलाकार पार्टीमा सहभागी भए । त्यो पार्टी कुनै नेपाली सिनेमाको सफलताका लागि थिएन । त्यो पार्टी साउथको सिनेमा केजीएफले नेपालमा ५१ दिन मनाएको उपलक्ष्यमा आयोजना […]
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली सिनेमा नचल्नुको कारण के ? टाढा जानै पर्दैन, यतै खोज्न सकिन्छ । नेपाली सिनेमा नचल्नुको मुख्य कारण, नराम्रो सिनेमा बन्नु । तर, कारण यत्ती मात्र होला त ? त्यो पनि होइन । […]